August 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Aug 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay…
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Qunduuz.(Dhagayso)
Magaalada Qunduuz oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Afqaanistaan waxaa dagaal ku galay ciidamo katirsan Imaarada islaamiga. Dagaallada ayaa ah kuwa culus, inta badana magaaladana waxaa gacanta ku dhigay Mujaahidiinta.…
guuleed	 Aug 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa sabti waxay taariikhda hijriga ku beegan…
Ciidamada Jabuuti Oo gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in magaalada ay gaareen ciidamo katirsan kuwa Jabuuti ee qeybta ka ah Shisheeyaha AMISOM ee duulaanka ku jooga Soomaaliya. Guutooyinkan katirsna…
Dhaalibaan Oo la wareegtay inta badan magaalada Qunduuz.
Weeraro ballaaran ayay ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ku qaadeen magaalada Qunduuz oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dhaca wuqooyiga wadanka. Wararka ka imaanaya Qunduuz ayaa sheegaya in qeybo badan oo kamid ah…
Weeraro ka kala dhacay gobollada Shabeellooyinka.
Guutooyinka kala duwan ee ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay fuliyay weeraro waxyeello dhaliyay, kuwaas oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe. Haddii aan ku hormarno magaalada Jowhar ee…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 29-12-1440
Axmad	 Aug 30, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Jimco waxay taariikhda hijriga ku beegan…
Dhageyso:Diirada Jimcaha oo looga hadlay Damaca Kenya ee Jubooyinka.
guuleed	 Aug 30, 2019 0
Barnaamijka diirada jimcaha oo ah barnaamijka Todobaadle ah ayaa maanta lagu faaqiday doorashada khilaafka hareeyay ee rag isdoortay ku soo bandhigeen Magaalada Kismaayo. Waxaa aad loogu faaqiday damaca Kenya ee Jubooyinka. Martida:…